Momba anay - Chengdu Hemeikaineng Medical Equipment Co., Ltd.
Ny fikolokoloana ara-pahasalamana no tanjonay
Ny fahasalamana dia mitovy amin'ny 1. Amin'ny fahasalamana ihany no ahafahan'ny olona miasa mafy, mamorona harena ary mankafy fiainana. Ireo no zerô ao ambadik'ilay iray. Amin'izao fotoana izao, na inona na inona indostria misy anao, ny vatanao no renivohitry ny revolisiona, ary vatana salama ihany no ahafahanao manokan-tena amin'ny asanao sy ny fianakavianao. Raha ny marina, na dia manan-talenta toy inona aza ny olona iray, raha tsy manana vatana salama iadiana izy, dia tsy hahatsapa ny filam-baniny amin'ny farany. Rehefa dinihina tokoa, ny zavatra atahorana indrindra amin'ny fiainana dia tsy ny tsy fahombiazana, fa ny tsy fahampian'ny angovo. Ny asa sy ny tsindry ainny olona maoderina dia mitombo, ary ny vatana dia ao anaty toetry ny fahasalamana mandritra ny fotoana ela. Mandritra izany fotoana izany, miaraka amin'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny olona, ​​ho an'ny fiainana tsaratsara kokoa, ny olona dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fahasalamany ary mitombo ihany koa ny fangatahana vokatra ara-pahasalamana.
Ny vokatra azon'ny HMKN dia afaka manampy ny olona hiatrika tsaratsara kokoa ny olan'ny fahasalamana. Ohatra, raha manao sarontava ara-pitsaboana azo ampiasaina izahay dia azonao atao ny manala ny bakteria sy ny viriosy ary misoroka ny aretina mifindra toy ny COVID-19; raha mampiasa ny tehina famonoana UV izahay dia afaka manafoana bakteria sy virus amin'ny zavatra; ny fampiasana ny oxygen concentrator-tsika dia tsy vitan'ny fanalefahana ny havizanana, hampiala ny vatana sy ny saina, hanatsara ny famatsian-kozatra an'ny ati-doha, ary hifehezana ny fiasan'ny rafi-pitabatabana kranial amin'ny lafiny iray, fa hanatsara ihany koa ireo soritr'aretin'ny oxygenemia ambany, hanamaivanana ny bronchospasm , manala fahasahiranana amin'ny fifohana rivotra, mampihena ny isan'ny hopitaly sy ny areti-mifindra aorian'ny fandidiana ary ny antiemetika.
Chengdu Hemeikaineng Medical Equipment Co., Ltd. dia orinasa sinoa iray izay miahy ny fahasalamana sy ny fiarovana ny besinimaro sy ny olombelona rehetra. Niorina tamin'ny 2013 izahay ary manana foibe any Chengdu, Sichuan. Izy io dia tena mamatsy vokatra ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana isan-karazany toy ny vatsy fisorohana valanaretina, fitaovana famonoana otrikaretina, ary fanafody azo ampiasaina sns. Ireo vokatra dia miompana amin'ny hopitalim-panjakana sy tsy miankina amin'ny ambaratonga rehetra, fivarotam-panafody fivarotana, sekoly, orinasa lehibe ary andrim-panjakana sns.
Ny orinasa dia manana andrim-pampianarana siantifika matihanina sy mpiasa mirotsaka amin'ny fikarohana sy fampandrosoana vaovao. Mampiasa fenitra saika henjana izahay hamoronana vokatra tonga lafatra, ary nandalo ny fanamarinana 13485, fanamarinana CE, ary fanamarinana FDA navoakan'ny fikambanana manam-pahefana manerantany. Mametraha rafitra fitantanana kalitao mifanaraka amin'ny fenitra ISO9001 sy ISO13485, mifehy tsara ny fizotry ny famokarana, ampiasao ny CP, MSA, 5S ary ny foto-kevitra momba ny fitantanana hafa hanamafisana ny fifehezana ny kalitaon'ny vokatra, ary manana fahazoan-dàlana Import sy export, seranan-tsambo elektronika ary fanekena mifandraika amin'izany. fomba fanao amin'ny fanaraha-maso ny fidirana amin'ny fidirana sy ny orinasa fampiharana karantina. Ankoatry ny vokatra R&D sy ny famokarana manokana dia manaraka ny fitsipika mifehy ny kalitao tsy tapaka ho an'ny vokatra soloinay ihany koa: mifehy fatratra ny dingana rehetra amin'ny fividianana akora, famokarana, fitaterana ary aorian'ny fivarotana; Ankoatr'izay, ny mpanamboatra izay miara-miasa amintsika dia tsy maintsy manana ny mari-pahaizana rehetra mifandraika amin'izany. Handefa ny mpiasanay manokana any amin'ny ozinina izahay hijerena matetika tsy tapaka amin'ny dingana rehetra amin'ny vokatra.
Manolo-tena izahay hanome vokatra ara-pitsaboana sy ara-pahasalamana avo lenta sy tsy lafo ho an'ny besinimaro hiarovana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny tena. Mandritra izany fotoana izany dia afaka manamboatra vokatra mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa isika.